Ngwa 10 kachasị mma maka ihu igwe | Gam akporosis
Ngwa 10 kachasị mma ihu igwe maka gam akporo
Ignacio Lopez | 14/04/2021 20:00 | Emelitere ka 20/04/2021 12:54 | Ngwa gam akporo
Lelee site na nke anyị ihu igwe ngwa Ọnọdụ ihu igwe nke ụbọchị ahụ bụ ihe ọtụtụ mmadụ na-eme mgbe anyị biliri iji mata ụdị uwe ma ọ bụ ngwa anyị ga-ahọrọ ịga ọrụ, ụlọ akwụkwọ sekọndrị, mahadum, ịga ahịa ma ọ bụ na-eje ije na nkịta.
N'adịghị ka iOS, na gam akporo anyị enweghị ngwa ala ọ bụla iji lelee ihu igwe, ma ọ gwụla ma anyị jiri ngwa Google, a manyere anyị ịwụnye otu n'ime ọtụtụ puku ngwa ihu igwe dị na Storelọ Ahịa Play. N’isiokwu a anyị na-egosi gị nke bụ ngwa ihu igwe kachasị mma maka gam akporo.
Agbanyeghi na ihu ihu igwe anatala otutu mmụba iji buru amụma banyere ihu igwe n'afọ ole na ole gara aga, rue taa, ọ ka dị agaghị ekwe omume ịkọwa ihu igwe gafere ụbọchị atọYa mere, mgbe anyị na-ahọrọ otu ma ọ bụ nke ọzọ, anyị ekwesịghị ịdabere na ihu igwe ọ na-azọrọ na ọ na-ebu amụma, ọkachasị n'oge oyi, ebe ọnọdụ ihu igwe na-adịgasị iche iche.
N'oge ọkọchị, mgbe anyị maara na ọ ga-ekpo ọkụ na mmiri anaghị atụ anya ọnwa ole na ole, ngwa ndị na-enye anyị amụma ihu igwe gafere ụbọchị atọ, ha na egosiputa ihe doro anya: ọ ga-ekpo ọkụ.
Akụkụ ọzọ na anyị ga-ttinye n'ime akaụntụ bụ isi sitere na data enweta. Ọ ka mma ịhọrọ ngwa nke ihe data ya dị na mba anyị, AEMET bụ isi ọrụ na Spain.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnata ọkwa nke mgbanwe na mberede na oge, anyị ga-ahọrọ otu ngwa nke na-eziga anyị ọkwa, ebe ọ bụ na ọ bụghị, a ga-amanye anyị ịkpọtụrụ ngwa ahụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwa na-enye anyị otu ozi ahụ, ọ bụghị ha niile na-enye anyị ụdị ozi ndị ọzọ nwere ike ịbịaru aka maka ọrụ anyị, maka oge anyị na-atụrụ ndụ na oge anyị n'efu ... dị ka ọ nwere ike ịbụ mgbe anwụ na-ada ma ọ bụ na-awa, ikuku ikuku o ala nke oké osimiri, ma ọ bụrụ na egwuregwu egwuregwu mmiri na-amasị anyị, ọ bụ ezie na maka nke a, e nwere ụdị ngwa ndị ọzọ.
Ozugbo anyị doro anya banyere ụdị ozi anyị chọrọ ịhọrọ nke bụ itinye nke oge kachasị mma maka mkpa anyị, anyị ga-egosi gị nke bụ, mgbe nyocha anyị, nke bụ ngwa kacha mma ihu igwe maka gam akporo. Usoro nke egosiri ha ejikọtaghị ya na ha dị mma ma ọ bụ ka njọ karịa ndị ọzọ.
2 Oge AEMET
3 Ihu igwe
4 Oge bụ
5 Ihuigwe Yahoo
7 Ọwa ihu igwe
9 Oke Ihu Igwe
10 Ihu Carrot
Ọ bụrụ na anyị kwesịrị ịma oge ha adịghị obosara nke ukwuu na anyị nwere mmasị naanị ịmara ọnọdụ okpomọkụ dị ugbu a, ihe ọ ga-eme ụbọchị niile ma ọ bụrụ na enwere ike ịme mmiri ozuzo, ọ dịghị mkpa ịbanye na ngwa ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ngwa Google, site na nhọrọ Day View.
The State Meteorological Agency (AEMET) nwere ngwa nke aka ya maka gam akporo, ngwa nke na-agwa ihe niile gbasara ihu igwe nke obodo ọ bụla, gụnyere ọkwa ọkwa nke ahụ a.
Ngwa a na-enye anyị amụma oge awa ruo ụbọchị nke atọ nke ihe karịrị obodo 8.000 na Spain niile, gụnyere ihe oyiyi radar sitere na Satellites, ịdọ aka ná ntị maka ihe ndị na-adịghị mma ma nyekwa anyị ohere ịmara ọnọdụ nke ụsọ mmiri ụbọchị abụọ tupu oge eruo.
Ọ na-enye anyị ohere ịchekwa ebe dị iche iche, kesaa ozi gbasara ihu igwe site na ngwa izipu ozi yana gụnyere ihu igwe wijetị maka ihu igwe nke ngwaọrụ anyị nke na-egosi anyị amụma ụbọchị na ruo ụbọchị 5 tupu oge eruo.
Oge AEMET chọrọ gam akporo version 4.4 inwe ike ibudata ya, ngwa nke karịrị otu nde nbudata kemgbe ọ bịarutere na Storelọ Ahịa Play.
Clima Weather bụ otu n'ime ngwa zuru ezu na anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play, zuru oke nke na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịme mgbagwoju anya site n'inye ọtụtụ ozi n'otu ebe. Site na ngwa a anyị nwere ike ịmata ọ bụghị naanị ihu igwe ugbu a, kamakwa amụma maka ụbọchị ole na ole sochirinụ, iru mmiri na ikuku ikuku, ọnwa na-agba, ọsọ nke oge ...
Ọ na-enye anyị ohere ịgbakwunye ọnọdụ dị iche iche, gụnyere a ezigbo oge radar nke ahụ na-enyere anyị aka ịhụ etu ọnọdụ ihu igwe siri dị iche site na nsuso ngagharị nke igwe ojii na oke ifufe ... Dịka ezigbo ngwa ihu igwe, ọ na-enye anyị ohere itinye na wijetị ụlọ wijetị nhazi na ihu igwe ihu igwe kwa ụbọchị, kwa elekere nke na-egosipụtakwa ọnọdụ ihu igwe.
Clima Weather dị maka gị budata n'efu ọ gụnyere mgbasa ozi, mgbasa ozi anyị nwere ike iwepụ site n'iji nzụta ihe dị n'ime ngwa nke ọ na-enye anyị na nke nwere ọnụahịa nke euro 3,39. Opekempe gam akporo iji wụnye ngwa a ihe karịrị 1 nde downloads bụ 4.2.
Ihu igwe - Weather
Developer: Weather amụma & ngwaọrụ & Rada
N'azụ ngwa ngwa na mgbasa ozi Eltiempo.es bụ otu n’ime ndị na - eweta ihu igwe ama ama na Spen: Mario Picazo. Ngwa a na-enye anyị amụma ihu igwe oge awa maka ụbọchị iri na anọ karịa ebe 14 (ọdụ ụgbọ elu, ụlọ akwụkwọ, ụsọ osimiri, ọmụmụ golf, ama egwuregwu bọọlụ ...).
Gụnyere wijetị wijetị nke ahụ na-enye anyị ohere ịnweta ozi ihu igwe dị oke mkpa dị ka okpomọkụ, mmetụta ọkụ, ọsọ ikuku, ikuku ikuku, ogo ikuku yana ọkwa pollen site na mpaghara.
Ọ na-enyekwa anyị ihe omuma banyere oke osimiri n’ime isi mpaghara iri na abụọ ndị Spen dị n’ụsọ oké osimiri. Ọ na-enye anyị ozi gbasara ihu igwe maka Europe ma gụnye ịdọ aka na ntị ihu igwe site na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihu igwe nke steeti (AEMET).
Ngwa dị maka gị budata n'efu ma gụnye mgbasa ozi, mgbasa ozi nke anyị na - enweghị ike iwepu n'ụzọ ọ bụla site na nzụta ngwa dị ka a ga - asị na ha gụnyere ụdị ngwa ndị ọzọ.
Iji nwee obi uto ngwa a ihe karịrị nde 5 nbudata, Anyị gam akporo ama ga-jisiri site gam akporo 5.0 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
Developer: Oge Atụrụ Anya Ya
Otu n'ime ngwa ihe mara mma n'anya bụ ihu igwe Yahoo, ngwa na-egosi anyị onyogho ndị mara mma nke obodo ebe anyị chọrọ ịma ozi gbasara ihu igwe.
Ngwa a na-enye anyị ihe omuma banyere ihu igwe Na ụbọchị 10 sochirinụ, ọ gụnyere radar mmekọrịta, satịlaịtị, okpomoku na eserese ihu igwe yana ịmara ọkwa ihu igwe dị mkpa.
Na-enye anyị ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ animations na ifufe modul. Ọ na-egosikwa anyị mmetụta nke ọkụ, iru mmiri iru mmiri, ọnụọgụ ụzarị ultraviolet na pasent puru nke ọdịda. Ọ gụnyekwara wijetị na ihuenyo, ọ bụ ezie na nhọrọ nhazi adịghị oke elu.
Yahoo Weather, na ihe karịrị nde 10 nbudata dị maka nbudata kpamkpam n'efu ma nwee mgbasa ozi, mana ọ bụghị nhọrọ iji wepu ha site na iji ịzụta ihe n'ime ngwa.
Ngwa ọzọ na a mara mma nke ukwuu Anyị na-achọta ya na Klara, ngwa nke na-egosi anyị ozi gbasara ihu igwe site na eserese dị mfe iji dọọ. Klara na-enye anyị ozi gbasara okpomọkụ, mkpuchi igwe ojii, ọsọ ihu igwe, nrụgide nke ikuku na iru mmiri.
Ngwa ahụ na-enye anyị ohere ịhọrọ n'etiti isiokwu 4 dị iche iche, nwere wijetị maka ihuenyo ụlọ, anaghị agụnye mgbasa ozi ma dị maka nbudata kpamkpam n'efu.
Ọwa ihu igwe
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ihu igwe ngwa, anyị ga-ekwu okwu banyere Weather ọwa, otu n'ime ngwa ndi ozoỌfọn, kama otu n'ime ọrụ ịkọ amụma ihu igwe kachasị n'ụwa.
Ihu igwe na-enye anyị mgbagha ihu igwe na mberede, ozi banyere ihu igwe na mpaghara anyị ma na-enye akụkọ ziri ezi banyere ihu igwe na ụbọchị 15 na-esote ...
Ngwa a na-enye anyị Ọrụ 5:
Ihu igwe nke ọnọdụ anyị na ndị anyị setịpụrụ dị ka ọkacha mmasị, yana ọnụ ọgụgụ na eserese na oge.
Usoro ịdebanye aha na njikere site na ntinye ọkwa.
Ọnọdụ ihu igwe nke na-enye anyị ohere ịgbaso mgbanwe nke ihu igwe na awa na ụbọchị ndị na-esote.
Oke ihe mgbaàmà banyere ihu igwe dị ka égbè eluigwe ma ọ bụ snowfall.
Ozi zuru oke banyere ikuku ifufe na ntopute ya n'ụdị oke ikuku ma ọ bụ ihe ikuku ndị ọzọ.
Weather ọwa dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na usoro ndenye aha kwa ọnwa iji kpochapụ ha ma nwee ọ enjoyụ na ọrụ niile ọ na-enye anyị. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde nbudata 2,5 na akara ngosi nke 4,6 kpakpando n'ime 5 ga-ekwe omume, ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma dị na ahịa.
Ihuigwe - Weather Channel
con ihe karịrị nde 100 nbudata, anyị na-achọta AccuWeather, ngwa nwere akara nke 4,2 kpakpando n'ime 5 nwere ike ibudata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe iji kpochapụ ha.
AccuWeather na-enye anyị usoro wijetị iji tinye na ihuenyo ụlọ nke anyị nwere ike mara okpomọkụ, ikuku ikuku na iru mmiri na ilekiri nakwa na anyị nwekwara ike ịhazi iji gosipụta ozi ma ọ bụ obere. Ọ na-enye anyị ozi gbasara ihu igwe maka ụbọchị 15 na-esote, ọ na-enye anyị ohere ịnweta vidiyo na mmalite nke oge amụma.
Gụnyere ngwa maka Wear OS, ma ọ bụrụ na ị nwere smartwatch na sistemụ arụmọrụ a, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụdị nke ngwa ahụ na nkwojiaka gị.
AccuWeather: Amụma & Weather Alerts
Oke Ihu Igwe
Ọ bụrụ na ị chọrọ wijetị, ngwa ị na-achọ ịmata ugbu a na ọdịnihu ihu igwe bụ Overdrop, ngwa nke na-enye anyị ohere itinye ọtụtụ wijetị na ihuenyo ụlọ yana ozi kachasị amasị anyị gbasara ihu igwe, ụbọchị nke anyị chọta, ihu igwe ugbu a na ụbọchị ole na ole sochirinụ, batrị fọdụrụ ...
Overdrop na-enye anyị ozi gbasara ihu igwe maka awa 24 na-esote yana ụbọchị asaa na-esote, gụnyere sistemụ njikere, 5 gburugburu iji hazie ọdịdị ma dị maka nbudata kpamkpam n'efu gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji wepu ha.
Oke ihu igwe - Amụma amụma na ngwaọrụ
Ọ bụrụ na ị na mbụ na-eji ihe iPhone, eleghị anya ị maara ngwa Carrot, otu n'ime ngwa ndị kachasị ewu ewu na iOS iji mara ozi ihu igwe na nnukwu nkọwa na otu amụma kachasị mma na-enye.
Ngwa dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na usoro ndebanye aha kwa ọnwa iji nwee ike ịnweta ozi niile nke ngwa ahụ na-enye anyị na mgbakwunye na iwepu mgbasa ozi.
Carre ihu igwe
Developer: LLClọ ọrụ Grailr
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 10 kachasị mma ihu igwe maka gam akporo